Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Dubai - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Dubai (Carabi: بي) Waa magaalo weyn oo caalami ah waana magaalo caalami ah oo ku taal Jasiiradda Carabta. Dubai waa mid ka mid ah tobanka dalxiis ee ugu caansan adduunka. Dubai waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu casrisan uguna horumarka badan Bariga Dhexe sidoo kale mararka qaar waxaa loogu yeeraa "Magaalada Dahabka" sababtoo ah taariikh ahaan waxay xarun u tahay ganacsiga dahabka iyo sidoo kale isbadalka deg degga ah ee ka yimaada lamadegaanka una galay magaalo raaxo leh.
Dubai waxaa lagu gartaa dhul baaxad leh oo lamadegaan ah oo isu beddelaya qaab mustaqbal mustaqbal leh oo daaraha dhaadheer leh ee xeebta ku teedsan. Magaaladu waxay siisaa labada aragtiba ganacsigii hore iyo taariikhaha quusinta taariikhda Carabta ee Deira iyo Bur Dubai iyo ganacsi casri ah oo casri ah oo casri ah oo nolosha ka dhex muuqda magaalada Jumeirah. Dubai mararka qaar si khalad ah ayaa looga fekeraa dal, si kastaba ha ahaatee waa Emirate waxayna ka mid tahay Imaaraadka Carabta.
Dubai waa xarun ganacsi iyo dhaqan ee Bariga Dhexe, waa xarun gaadiid caalami ah, waxayna soo jiidatay indhaha adduunka iyada oo loo marayo mashaariic badan oo waaweyn oo xagga dhismaha ah iyo dhacdooyin isboorti. Magaalada waxaa astaan ​​u ah daaraheeda dhaadheer, oo ay ku jiraan dhismaha adduunka ugu dheer, Burj Khalifa, marka lagu daro mashaariic horumarineed oo hami leh oo ay ka mid yihiin jasiirado gacan-ku-samays ah, hudheelo heer caalami ah, iyo qaar ka mid ah xarumaha ganacsiga ee ugu waaweyn uguna casrisan adduunka.
Xarunta maaliyadeed ee hore, maanta waa degmo ganacsi oo aad u buuq badan oo leh souks duug ah, oo ay ku jirto mid ku takhasusay uunsiga
Degmo taariikhi ah oo ku taal dhinaca koonfureed ee Dubai Creek, oo leh soo jiidasho abras makhaayadaha makhaayadaha dul sabeynaya Creek-ka caanka ah
Isku darka kaladuwan ee dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha xeebta. Waa Yurub yar oo isku dhafan, Karachi iyo Manila. Jumeirah aad ayey ujecelyihiin reer Yurub sababtoo ah marinka xeebta oo sahlan. Jumeirah Beach, Dubai Marina iyo Masjidka Jumeirah ayaa ah meelaha ugu soo jiidashada badan. Marina waa horumar-weyn oo ka kooban dhismayaal dhaadheer. Sidoo kale daboolaya Dubai Mall iyo Burj Khalifa.
Dekeda weyn ee ay sameysay Mega, goobta garoonka cusub, Dubai World Central, goobta loogu talagalay Expo 2020, iyo barta laga soo galo Palm Jebel Ali
Xaafadaha & Hatta
Magaalada Dubai hareeraheeda laga soo bilaabo xeebta iyo Hatta, ayaa ah xadka u dhexeeya Cumaan.
In kasta oo ay tahay meel dalxiis oo cusub loo tago, Dubai waa aasaas ahaan magaalo cidla ah oo leh kaabeyaal heer sare ah iyo siyaasado xor ah (oo lagu qiimeeyo heerarka Islaamka) oo caan ku noqday waxyaabaha dalxiis ee aadka u wanaagsan. Kaliya shan saac oo duulimaad ah oo ka socota Yurub iyo seddex saacadood oo ka imanaya inta badan Bariga Dhexe, Bariga dhow, iyo qaaradaha Hindiya, Dubai waxay sameysaa nasasho gaaban oo weyn oo loogu talagalay dukaameysiga, xafladaha, qorraxda qorraxda, cunnooyinka wanaagsan, dhacdooyinka cayaaraha, iyo xitaa inyar. raaxaysiga dembiga leh. Khaniisnimada waa dambi fuliya ciqaabta dilka ee Dubai, dadka khaniisiinta ahna waa la xiri karaa kadibna waa loo dili karaa bandhigyada dadweynaha ee kalgacal noocuu doono ha ahaadee. Ma jiraan hal warbaahin madax-bannaan oo ka jirta Imaaraadka. Waddanku ma aha dimuqraadiyad, in kasta oo ay jiraan sharciyo ku yaal Dubai, haddana waxay ku dabaqayaan qaar ka badan kuwa kale. Tan ayaa la sheegay, Dubai waxay u muuqataa inay ka faro yar tahay dalal badan oo deriskeeda ah. Dubai waxay leedahay mid ka mid ah dadka ugu badan ee soo galootiga ah ee adduunka ku nool, iyo cunnooyinka qowmiyadeed ee la soo bandhigo ayaa ka sarreeya heerarka caalamiga ah. Badbaadada shaqsiyeed maahan arin ku taal Dubai, oo dumarka iyo ragga labaduba si xor ah ayey u socon karaan saacadaha oo dhan maalin iyo habeenba.
In kasta oo xaqiiqda ah in Carabiga uu yahay afka rasmiga ah, waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in shisheeyaha ay ka tiro badan yihiin Emiratis ku dhowaad 4 illaa 1 magaalada Dubai, waa ammaan in la yiraahdo dadka intiisa badan kuma hadlaan. Ingiriisigu wuxuu u adeegaa sida luuqadda Faransiiska, iyo inta badan Emiratis waxay ku hadlaan Ingiriis si ay ula xiriiri karaan shaqaalaha muhaajiriinta ah ee iyaga u shaqeeya. Xaqiiqdii, dukaamada badankood waxaa ka shaqeeya shaqaale muhaajiriin Hindi ama Filibiin ah halkii ay ka ahaan lahaayeen Emiratis.
Fasaxa toddobaadlaha ahi waa Jimcaha. Laga soo bilaabo Sebtember 2006, isbuuc la jaanqaaday Jimcaha iyo Sabtida ayaa loo ansaxiyay waaxda dawladda iyo dugsiyada. Waaxaha dowladda, shirkadaha caalamiga ah, iyo iskuulada iyo jaamacadaha badankood waxay fasax ka qaataan Jimcaha iyo Sabtida (kadib sanado badan oo isku dhafan oo Jimco ah / Sabti iyo Khamiis / Jimco). Qaar ka mid ah shirkadaha maxalliga ah ayaa wali shaqeeya maalin badhkeed Khamiista iyada oo maalin buuxda la leh Sabtida, laakiin shirkadaha waaweyn waxay u muuqdaan kuwo fasaxaya fasax ka qaadashada shaqaalahooda jimcaha iyo Sabtida.
Magaalada Dubai waxay ku taal xeebta xeebta ee xadka la leh lama degaanka iyo helitaanka aad u kulul. Waa qalalan maalmaha ugu kulul waana qoyaan inta lagu jiro maalmaha qaboobaha xagaaga. Qabow, cimilo aad u wanaagsan ayaa socota laga bilaabo dhammaadka Sebtember ilaa bilowga Maajo (in kasta oo wanaaggu qaraabo yahay, oo heer kulka maalin kasta laga bilaabo Oktoobar ilaa Janaayo iyo Maarso ilaa Maajo weli yahay 20-25 ° C (68-77 ° F), laakiin noqo loo diyaariyey heerkulka habeenkii qabow.Guud ahaan xilliga qaboobaha heer kulka inta badan waa 10 ilaa 16 ° C (50 ilaa 61 ° F). Laga bilaabo Maajo ilaa Sebtember, qorraxdu way kacsan tahay Agoosto heerkulkiisuna wuxuu taabanayaa 54 ° C (129 ° F ) magaalada dhexdeeda iyo xitaa ka sareysa lamadegaanka Kuleylka, oo ay weheliso qoyaan 60% - 70% u dhow xeebta, ayaa si wax ku ool ah u diidaya inta badan dhaqdhaqaaqa banaanka saacadaha dharaarta xilliga xagaaga.
Wild Wadi Waterpark iyo Jumeirah Beach Hotel
Diisambar illaa Abriil guud ahaan waxay soo saartaa roobka ugu sarreeya, in kasta oo in yar oo ka mid ah, ay tahay 100 milimitir (wadarta 3.9) wadar ahaan sanadkii. Sannadaha qaarkood waxay dhalaan wax aan ka badnayn dhawr daqiiqo oo maydhasho ah.
Eeg qaybta ka hel Imaaradka ee fiisaha iyo xeerarka kastamka.
Gegada diyaaradaha ee ugu weyn Dubai waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai (). Beddelkeeda ugu dambayn, Al Maktoum International Airport (), waxay u furan tahay duulimaadyada rakaabka laakiin waxay kaliya u adeegtaa duulimaadyo kooban. Waxa kale oo aad ku geli kartaa Dubai adoo adeegsanaya Madaarka Caalamiga ah ee Sharjah () ee ku yaal imaarada dhow ee Sharjah iyo Garoonka Diyaaradaha Abu Dhabi () agagaarka Abu Dhabi.
Duulimaadyadu badanaa waxay leeyihiin dagaallo qiimo leh oo taga meelo qurux badan sida Dubai tanina waxay kaaga shaqeyn kartaa faa iidadaada adoo si taxaddar leh u qorsheynaya una barbardhigaya shirkadaha diyaaradaha ee kala duwan ee u adeegaya Dubai. Emirates waa shirkadda duulimaadka rasmiga ah ee Dubai taas oo isku xirta Dubai in ka badan 100 meelood halka FlyDubai uu yahay duuliyaha Dubai ee qiimaha jaban. Etihad waxay leedahay adeegyo duulimaad oo ka socota jeeggooda gaarka ah ee ku yaal waddada Sheikh Zayed Road ama Bartamaha Ganacsiga ee Dubai oo ka timaadda iyo garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi Int'l, waxaad sidoo kale la duuli kartaa shirkadda Sharjah ee qiimaha jaban; Air Arabia oo u duuleysa in ka badan 46 meelood oo Bariga Dhexe ah. Qiimaha hoose ee ka yimaada Waqooyiga Ameerika ayaa inta badan laga helaa Qatar Airways, hase yeeshee tan iyo bishii Juun 2017 Qatar Airways waxaa laga mamnuucay inay u duusho Dubai illaa khilaaf xagga diblomaasiyadda ah darteed.
Garoonka Dubai International. Tani waa xarunta ugu weyn ee Bariga Dhexe iyo saldhigga guriga calanka sidaha Imaaraatka carabta iyo duulimaadkeeda qiimaha jaban ee flydubai. Waxay ku korodhay xawaare caynkan oo kale ah oo xarumaheeda ay ku qarxayaan xarkaha, gaar ahaan inta lagu jiro saacadaha ugu sarreeya saqda dhexe. Soo-booqdayaasha soo noqnoqda ee ka yimaada waddammada la siiyay fiisada otomaatiga ah ee soo gelitaanka waxay rabi karaan inay iibsadaan kaarka elektaroonigga ah si loo dardar-geliyo qaab-dhismeedka socdaalka loona keydiyo bogagga baasaboorka. Xafiiska kaarka elektaroonigga ah wuxuu ku yaal aagga maxkamadda sare ee cuntada ee isgoyska Terminal 1. Kaarka wuxuu ku kacayaa 200 dirham. Si aad uga iibsato kaarka elektaroonigga ah ee Dubai, waa inaad ku soo gashay UAE garoonka diyaaradaha ee Dubai.
Dubai World Central - Madaarka Caalamiga ah ee Al Maktoum. Garoonka ayaa loo furay duulimaadyada rakaabka bishii Oktoobar 2013 wuxuuna leeyahay hami weyn inuu noqdo garoonka ugu weyn adduunka, awood u leh inuu u adeego 160 milyan oo rakaab ah sanadkii. (Marka la barbardhigo, London Heathrow waxay leedahay qiyaastii 70 milyan.) Waqtigaan la joogo waxaa kaliya u adeega dhowr xamuul oo qiimo jaban sida Wizz Air iyo flydubai (kuwa kale ee xamuulka qaada badanaa waxay ka shaqeeyaan sharciyeyaal xilliyeed ka yimaada Yurub). Waxay xarun weyn u tahay duulimaadyada xamuulka. Emirates ma qorsheyneyso inay ka wareegto illaa sanadka 2025 ama wax la mid ah. Gegada diyaaraduhu waxay ku taal Jebel Ali dhamaadka galbeed ee fog ee Dubai, meel u dhow 60 km u jirta badhtamaha Dubai iyo ilaa 110 km u jirta Abu Dhabi. Khad tareen ayaa la qorsheeyey, laakiin xulashooyinka gaadiidka ee hadda jira waa taksi, taas oo ku kici doonta in ka badan 100 dirham inta badan magaalada, iyo Khadadka basaska F55 / F55A. F55 waxay iskuxidhaa garoonka diyaaradaha Al Maktoum iyo Ibnu Batuta Metro Station inta lagu jiro maalinta, halka F55A ay maamusho inta udhaxeysa garoonka diyaaradaha Al Maktoum iyo istaanka basaska ee Al Satwa habeenkii. Basasku waxay saacad kasta ka baxaan garoonka diyaaradaha.
Madaarka Caalamiga ah ee Sharjah (imaarada Sharjah). Waxay ujirtaa 30 min safar ahaan magaalada Dubai waxayna qaadataa duulimaadyo caalami ah oo sii kordhaya iyadoo garoonka diyaaradaha Dubai uu la halgamayo inuu la socdo baahida. Maamulaha guud ee halkan keena waa Air Arabia, oo ah shirkad qiimo jaban oo u adeegta Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya. Madaarku waa cadaalad aasaasi ah laakiin waa la balaadhinayaa. Taksi taga Dubai wuxuu caadi ahaan ku kacayaa 50 dirham. Adeeg bas ah oo ay leedahay shirkadda Air Arabia ayaa sidoo kale ka bilaabata garoonka diyaaradaha illaa saldhigga Mashiinka Rashiidiya ee magaalada Dubai. Rashiidiya metro station waxay ku taal meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai.
Duulimaadyada gaarka loo leeyahay
Dubai waxay hoy u tahay bulshada duulimaadyada gaarka loo leeyahay, oo leh jaangooyooyin qaali ah iyo diyaarado ganacsi oo u kala goosha London, Moscow, iyo Mareykanka maalin kasta. Waxaa jira FBO badan oo lagu dejiyo dadka safarka ah ee raaxada iyo ganacsiga, iyo shirkadaha sida PrivateFly iyo Axdiga Jet Gaarka ah waxay siisaa dalabyo qandaraasyo diyaaradeed oo khaas ah diyaarado kala duwan, laga bilaabo kuwa raaxada ee loo yaqaan 'Gulfstreams' iyo kuwa duulimaadyada VIP-da ah ilaa ay ka helaan bistoolado matoorro mataano ah iyo helikabtarro kooxo iyo shaqsiyaad yaryar ah.
Xuduuda kaliya ee caalamiga ah ee Dubai ay la leedahay Cumaan waa Al Wajajah. Qurbajoogta degan Cumaan waxay u baahan doonaan ruqsad rasmi ah si ay uga baxaan Cumaan wadada. Soo-booqdayaashu uma baahna rukhsad. Waxaa jira lacag ah OMR3 oo ah halkii baabuur ee aad uga baxdo Cumaan, haddii aad soo noqotana, hayso rasiidka lacagta ah maadaama looga baahan yahay dib u soo galid. Hubso in caymisku u shaqeynayo UAE (doorbid intaanad safarka bilaabin). Caymiska ku meel gaarka ah ee UAE waxaa laga iibsan karaa xadka qiimo qiimo leh.
Waxa kale oo jira xuduudo wadooyin ah oo udhaxeeya Imaaraatka Abu Dhabi iyo Cumaan ee dariska la ah Al Burami Oasis kaas oo kala qaybiya tusmada walaalaha ee Al Ain iyo Al Burami, Oman.
Dubai waa magaalo aad ugu jahaysan baabuurta dadka badankoodna waxay doortaan inay taksi qaataan halkii ay ka raaci lahaayeen nidaamka gaadiidka dadweynaha. Waxaad si fudud uga heli kartaa iyaga safka taksiga ama waxaad ku dul fududaan kartaa hal waddo, laakiin tani way adkaan kartaa inta lagu jiro saacadaha degdegga. Sidoo kale qaarkood xitaa way diidaan raacid gaaban meelaha ciriiriga ah.
Calaamadaha calaamadaha ayaa ku xun Dubai, tagaasida ayaa badanaa luma. Waxa ugu fiican ee la sameeyo ayaa ah in laga raaco meelaha caanka ah ee caanka ah, sida hoteelada. Qalabka GPS-ka badanaa waa duugoobay. Magacyada waddooyinka iyo waddooyinka waxay noqon karaan kuwo aad u jahwareersan, maxaa yeelay tarjumaadaha kala duwan ee ka soo baxa Carabiga, waxaad ogaan doontaa in kala duwanaanshaha yar ee higgaadda ay aad muhiim u tahay.
Waxaad ka heli kartaa wakaalado badan oo kirada baabuurta ah oo ku siin doona gaari qiimahoodu aad u jaban yahay oo kaliya Ogolaanshaha Wadista Caalamiga ah, haddii aadan haysan mid ka mid ah Imaaraatka. Wakaaladaha qaarkood sidoo kale waxay bixiyaan adeeg kireysi baabuur oo ay la socdaan darawalada, waana ikhtiyaar aad ugu raaxeysan kara booqdayaasha, qaasatan haddii darawalku ku hadlo Ingiriisiga oo uu ka warqabo jidka magaalada ku yaal in ka badan darawalada tagaasida badankood.
Qaar ka mid ah shirkadaha kirada baabuurta ugu fiican waa: Careem Car Services, oo bixisa nidaam ballansi fudud ah oo leh barnaamij lagu raad-raaco waqtiga-dhabta ah iyo, haddii aad u baahato, waxaad kireysan kartaa gaari cunug la fadhiisto. DotTransfers waxay kaloo bixisaa adeegyo dheeri ah sida gaadiidka fulinta iyo adeegga limousine oo leh heerar cadaalad ah iyo caawimaad ballansi wanaagsan. Ahdab International Luxury Transport waa koox khibrad sare leh oo xirfadlayaal ah laakiin qiimahoodu aad ayuu qaali u yahay.
Dowladda Dubai waxay ka shaqeysaa shabakad basas ah oo isku xireysa magaalada Dubai iyo caasimadaha lixda imaaradood ee kale ee Imaaraadka. Basaska waxay ku ordaan magaca Emirates Express kana shaqeeyaa boosteejooyinka basaska kala duwan ee ku yaal Dubai. Wixii jadwal ah eeg websaydhka.
Laga soo bilaabo Abu Dhabi: Basasku waxay shaqeeyaan 40kii daqiiqo ee kasta laga bilaabo 06: 20 markay ka yimaadaan saldhiga basaska ee Al Ghubaibah ee Dubai iyo saldhiga weyn ee basaska ee Abu Dhabi. Safarka oo laba saacadood qaatay wuxuu ku kacay 25 dirham.
Ka yimid Sharjah: Basas isdaba joog ah ayaa mara inta udhaxeysa Dubai iyo Sharjah. Waxaa jira dhowr waddo oo kala duwan basaskuna waxay ka baxaan saldhigyo basas kala duwan oo ku yaal Dubai oo ay ku jiraan Al Karama, Gold Souq, Baniyas Square, Jebel Ali iyo Al Ittihad Square. Qiimaha waa 7 dirham illaa Diseembar 2010.
Laga soo bilaabo Al Ain: Basasku waxay saacad kasta ka shaqeeyaan saldhiga basaska ee Al Ghubaibah ee Dubai. Safarka labada saacadood ah wuxuu ku kacayaa 15 dirham.
Ku / ka yimid Fujairah: Baska u socda Fujairah wuxuu ka tagayaa Saldhigga Metro ee Rashidiya wuxuuna qaadanayaa 3 ilaa 4 saacadood.
Safarka baska ee Sacuudi Carabiya, SAPTCO waxay bixisaa adeegyo basas maalinle ah oo ka yimaada magaalooyin sida Dammam iyo Riyadh.
Dubai waa xarun ganacsi oo loogu talagalay dhowska ka yimaada hareeraha Badweynta Hindiya. Socotada doonaya inay sidan ku yimaadaan magaalada waxay u badan tahay inay ubaahanyihiin inay lashaqeeyaan kabtanka markabka. Inta badan dhowsku waxay u shiraacaan Iran; qaarkood sidoo kale waxay aadaan Yemen iyo Soomaaliya. Ku dayashada Michael Palin iyo ku sii jeeda Hindiya oo saaran doon waa wax adag oo aan macquul ahayn.
Dubai waxay leedahay terminal safar caalami ah oo kuyaal Port Rashid. Inta lagu jiro xilliga qaboobaha Costa Cruises waxay leedahay saldhigyo ugu yaraan laba ka mid ah maraakiibteeda dalxiiska (Costa Luminosa, Cost Fortuna) oo ku taal Dubai.
Shirkadda Maraakiibta ee loo yaqaan 'Valfajr Shipping Company' waxay waddaa adeeg doon oo ka taga Bandar Lengeh iyo Bandar Abbas ee dalka Iiraan maalin kasta oo labaad, waxayna ku soo xirtaan Port Rashid ee magaalada Dubai, iyagoo soo laabanaya maalinta xigta Ka gudubka gacanka Beershiya waxay qaadataa qiyaastii 6 saacadood. Tigidhka tigidhka ah ee laba-geesoodka ahi wuxuu marayaa USD145 (1,450,000 Iiraaniyiin Iiraani ah) laga bilaabo Febraayo 2010 iyo tikidhada laba-dhaqaale ee tikidhada ah waxay ku kacaysaa USD122 (1,220,000 rials). Tigidhada waxaa ku jira qado u eg Iiraan.
Dubai Metro dhulka korkiisa
Nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Dubai ayaa laga yaabaa inuu yahay kan ugu fiican Bariga Dhexe, gaar ahaan ka dib markii la bilaabay metro, laakiin wali waa magaalo aad u jihaysan baabuurta dadka soo booqda badankooduna waxay ku dambeeyaan inay tagaasida qaataan. Ku Wojhati qorsheeyaha safarku wuxuu soo jeedin karaa habka ugu wanaagsan ee loo safro.
Baasaboor maalin ansax ah oo loogu talagalay raacid aan xad lahayn oo metro, taraam iyo basas ah ayaa ku kacaya 22 dirham, halka the Nol Silver Kaadhka qiimaha ku kaydsan wuxuu ku kacayaa 20 dirham (oo ay kujirto 14 dirham qiimihiisu yahay dheelitir) wuxuuna siinayaa 10% qiimo dhimis ah qiimaha metro iyo basaska labadaba. Labadaba waxaa laga heli karaa saldhigyada dhulka hoostiisa mara iyo saldhigyada basaska waaweyn. Kaarka qalinku wuxuu waxtar u leeyahay dadka isticmaala gaadiidka dadweynaha ee jooga Dubai in ka badan hal maalin. Iska hubi dhammaadka safarkaaga (tan waxaa ku jira basaska).
Tigidhka cas 2 dirham Tigidhka dib loo buuxin karo; ku habboon dalxiisayaasha, ansax ah 90 maalmood; si kastaba ha noqotee waa in loo adeegsadaa kaliya hal nooc oo tikidh gaadiid ah (tusaale hal tikidh aag ah lama buuxin karo laba tigidh aag ama maalin dhaaf xitaa marka la isticmaalo), wuxuu kaydin karaa ilaa 10 safar.
Kaarka qalinka 20 dirham (Qiimaha 14 dirham) Tigidhka dib loo buuxin karo, wuxuu shaqeynayaa 5 sano. Lagu taliyay haddii aad joogto in ka badan hal maalin.
Kaarka dahabka 20 dirham (Qiimaha 14 dirham) Tigidhka dib loo buuxin karo, waxaa loo isticmaali karaa Fasalka Dahabka.
Kaarka buluuga ah 70 dirham Kaadh shaqsiyeed, oo leh adeegyo khadka tooska ah ah sida taariikhda macaamil ganacsi iyo dib u buuxinta khadka tooska ah.
Dubai 52 kilomitir (32 mi) dheer Khadka Cas, oo la furay bishii Sebtember 2009, waa metrooga labaad ee dunida Carabta marka laga reebo Qaahira. In kasta oo khadku uusan u adeegin Xarunta hore ee magaalada, haddana waxay ku habboon tahay in lagu jiido xeebta dheer ee Dubai waxaana ka mid ah joogsiyada garoonka diyaaradaha, Burj Khalifa iyo Mall of Emirates. The Khadka Cagaaran, oo dhex marta xudunta magaalada, oo la furay Sebtember 2011. Waxaad ku wareejin kartaa labada xariiq ee Union Square iyo Khalid Bin Al Waliid (BurJuman). Waxa kale oo jira xariiqyo buluug iyo buluug ah oo dhismihiisu socdo taariikhaha furitaanka sannadaha soo socda. Bandhigga tartanka 2020 waxaa lagu dhammaystiri doonaa 2020 iyadoo ay ku kacayso 4.46 bilyan oo doolar.
Tigidhada hal mar waxay u dhaxeeyaan 2-8.50 dirham, ama labo jibaar u isticmaalka "Dahabka" gawaarida heerka koowaad haddii kaar casri ah oo dib loo isticmaali karo loo isticmaalo. Hal tikidh oo aan dib loo soo celin karin ayaa ka bilaabmaya 6 dirhams safarka hal aag, 8 dirham laba aag, iwm Tigidhada waxaa laga iibsan karaa mashiinada otomaatiga ah, xafiisyada tikidhada ama karraaniga macluumaadka iridda. Kaararka lacagta iyo lacag bixinta ayaa la aqbalaa (Visa iyo MasterCard). Tareenadu waxay socdaan 3-5 daqiiqo oo kasta laga bilaabo 05:50 ilaa saqda dhexe maalin kasta marka laga reebo Khamiista iyo Jimcaha, marka adeegyada la kordhiyo illaa 05: 50 - 01: 00 oo ku eg 13: 00–23: 59, siday u kala horreeyaan. Dhammaan idaacadaha waa kuwo hawo leh waxaana jira shabakad ballaaran oo basaska quudiya ah. Haddii aad qorsheyneyso inaad safarto goor dambe oo fiidkii ah, hubi saacadaha shaqada saldhigga maadaama tareenka ugu dambeeya uu bixi karo goor hore nidaamka rasmiga ah ee saacadaha shaqeynaya.
Nidaamka 5-km monorail ayaa ka xira rakaabka guud ahaan Palm Jumeirah illaa hudheelka Atlantis. Waxay kuxirantahay Dubai Tram. Tani maahan qayb ka mid ah inta kale ee Gaadiidka, sidaa darteedna, waxay u baahan tahay inaad iibsato tikit gooni ah (15 dirham hal dhinac ah iyo 25 dirham soo noqosho).
Nidaamkii ugu dambeeyay ee Dubai ee nidaamka gaadiidka waa Dubai Tram, oo la furay Nofeembar 12, 2014. Waxay siisaa rakaabku adeeg gaadiid raaxo leh oo ku wareegsan meheradaha ganacsiga iyo xilliyada firaaqada ah ee Dubai. The Dubai Tram wuxuu shaqeeyaa saacadaha 19 maalin kasta oo u socda 14.5 km wadada Al Sufouh. Waxay ka gudubtaa hareeraha firfircoon ee Dubai Marina halkaas oo rakaabku loola dhaqmo aragtiyo qurux badan oo dhaadheer oo dhaadheer iyo doomaha raaxada, ka dibna wuxuu u socdaalaa Jumeirah isagoo maraya astaamaha Burj Al Arab.
The Dubai Tram wuxuu ku xiraa tareenka Dubai ee Jumeirah Lakes Towers iyo saldhigyada DAMAC, wuxuuna ku xiraa halbeega Palm Jumeirah. Ka baxsan Yurub, Dubai Tram waa nidaamkii ugu horreeyay ee taraamka ee adeegsada nidaam casri ah oo dhulka hoostiisa ah kaas oo baabi'inaya fiilooyinka dusha sare ee aan fiicnayn iyo kuwa halista ah.
Gaadiidka Dadweynaha ee Dubai waa hab jaban oo loogu safro dhowr degmo oo ka tirsan Dubai. Khariidad nidaamka basaska waxaa laga heli karaa khadka tooska ah, iyo sidoo kale khariidado waddo oo faahfaahsan iyo jadwalka. Basaska dadweynaha waa nadiif waana raqiis yihiin, laakiin nasiib daro maahan mid aad u dhameystiran oo (waddooyinka qaar) aad ayey u yar yihiin. Nidaamka basku wuxuu faa'iido badan u leeyahay inuu dhex maro aagagga kala duwan ee bartamaha Dubai, ama inta u dhexeysa xaafadaha kala duwan, halkii laga rari lahaa gaadiidka guud. Tagaasida ama qadar socod ah ayaa sidoo kale loo baahan doonaa haddii aad booqato Dubai adigoon haysan gaari aad iska leedahay.
Waxaad u baahan doontaa kaarka Nol ama tigidh lacag bixinta. Kaararka waxaa laga iibsan karaa inta badan saldhigyada basaska, saldhigyada dhulka hoostiisa mara, iyo mararka qaarkood darawalka baska.
Saldhigyada basaska ugu waaweyn waa Gold Souq Market (oo ku yaal Deira) iyo saldhigga basaska Al Ghubaiba (Bur Dubai). Qiimaha sicirka ah waa 2 dirham, laakiin waxaa laga yaabaa inuu ka sareeyo safarada saacadaha-dheer u socdaala xaafadaha fogfog. Khariidadaha marinnada cad iyo jadwalka waxaa la dhigaa meel dhowr istaago bas ah. Waqtiyada Ramadaan way kala duwan yihiin. Kuraasta hore waxaa loo qoondeeyay dumarka.
Malaha adeegga ugu faa'iidada badan ee dalxiis aan caadi aheyn waa Khadka 8, oo ka bilaabma Dahabka Souq, wuxuu qaadaa tuneelka hoostiisa Creek ilaa Heritage Village, ka dibna wuxuu aadayaa Wadada Jumeirah (oo ka dambeysa xeebta) iyo dhammaan hoteeladeeda iyo suuqyada waaweyn, illaa Burj al-Arab iyo Wild Wadi. Waxay joojineysaa meel u dhow Magaalada Internetka, halka noockeeda 8A uu hoos u sii yara dhacayo sidoo kalena wuxuu u adeegaa Mall-ka Imaaraatka.
By Hop-on Hop-off baska
Laba shirkadood oo Hop-on Hop-off ah ayaa tartamaya, oo leh ku dhowaad isku safar iyo qiime:
Bandhigyada Big Bus. Si wanaagsan, socdaalka Hop-on Hop-off isku day Tours Baska Weyn. Waxay wadataa laba waddo: waddada buluugga ah ee dhex marta Jumeirah iyo aagagga dhowaan la dhisay, iyo waddada cas oo ku taal qaybaha hore ee Dubai. Xudunta labada wado waa xarunta Wafi City. Tigidh dhan 220 dirham wuxuu daboolayaa 24 saacadood oo raacitaan ah.
Safarka Magaalada Badhkeed ee Dubai, Dukaanka Al Nasr Palace No 02, Oud Metha Road (opp: Xarunta Metrooga Oud Metha),, lacag-la'aan: + 971 55 403 0943.
Safarka indha indheynta magaalada Dubai waa mid ka madaxbannaan cadaadis si loo baaro dhinacyada casriga ah iyo kuwa dhaqameed ee Dubai.
Tagaasidu waxay maraan jidadka Dubai waana sahlan tahay in lagu arko maydkooda kareemada iyo saqafyada midabada leh. Meesha ugu fudud ee laga heli karo waa safka tagaasida mid ka mid ah xarumaha waaweyn ama hoteel ka baxsan. Inaad taksi kaga degto wadada waa macquul, laakiin wey adkaan kartaa inta lagu jiro saacadaha degdegga. Waqtiyada ugu sarreysa (07: 00-09: 00 & 16: 00-19: 00 maalmaha shaqada, iyo fiidnimada Jimcaha) dalabku wuu ka badan yahay sahayda, mana aha oo keliya tagaasida ay adagtahay in la helo, laakiin kuwa ku habboon inay ku soo qaadaan ayaa laga yaabaa inay dalbadaan waalli - mitir qiimayaasha ama diida raacid gaaban meelaha ciriiriga ah gebi ahaanba. Haddii aad aqbashid xigasho mitir ka baxsan, hubi in darawalku si cad u yiraahdo 'Dirhams' marmarna ereyga metamorphoses 'Doolar' markaad gaarto meesha aad u socoto. Sidoo kale, wadayaasha Shirkada Taksi ee Dubai waxay maraan isbadalkooda isbeddelka inta udhaxeysa 16: 00-18: 00 maalin kasta wayna adkaan kartaa helitaanka tagaasida waqtigan. Heerka wadista ee Dubai wuxuu u dhexeeyaa masaakiinta ilaa duurjoogta - tagaasida ayaa ah kuwa ugu xun waddooyinka. Wadayaasha tagaasida waxay ku fiican yihiin ogaanshaha halka ay ku yaalliin xarumaha waaweyn ee laga dukaameysto iyo hoteelada, hase yeeshe meelaha aan si fiican loo aqoon waxay ka dhigan yihiin in darawalku u yeerayo seedigiis si uu u helo tilmaamo, halka uu ku dhex wareegayo wareegyo waqtigaaga ah - markaa waa a waa fikrad fiican inaad fikrad xun ka haysato halkaad u socoto ama waxa u dhow ee aaggu yahay.
Tagaasida waxaa lagu qiyaasaa 1.82 dirham / km maalintii iyo habeenki 1.82 dirham / km, sidaa darteed hagoog looma baahna. Qiimaha dhammaan shirkadaha tagaasida - Dubai Transport, National, Baabuurta, Metro, iyo Arabian - waa isku mid, marka kaliya qaado kan ugu horreeya ee imanaya. Qaadista waddooyinka waxay soo jiitaan lacag joogto ah oo ah 5 dirham maalintii iyo 5.50 dirham habeenki (22: 00-06: 00). Laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha, waxaa jira lacag taagan 25 dirham; waxaa jira lacag dheeri ah oo ah 20 dirham tagista Sharjah. Qiimaha ugu yar ee 12 dirham ayaa khuseeya. Tagaasida waa laga dhaafay khidmadaha wadada Salik.
Ka taxaddar tagaasida huteel ee aan calaamadeysneyn iyo gawaarida limousines in kastoo: halka qaar ka mid ah mitirrada la cabiray ay yihiin ma ku xidhan heerarka rasmiga ah, waana qaali noqon karaan. Hal dariiqo oo lagu ogaan karo in taksi rasmi yahay iyo in kale waa raadinta mitir: mitir ma leh, ha galin.
Haddii aadan mid kale heli karin, waxaad isku dayi kartaa inaad ka wacdo Dubai Taksi 04-2080808 (rukhsad kastaa waxay leedahay nambarka ballansi u gaar ah laakiin hal nidaam dhexe), waxaa jira lacag dheeraad ah oo ah 3 dirham si loo xareeyo. Nidaamka ballansashada wuxuu caan ku ahaa kalsooni darro laakiin markii si weyn loo kordhiyay raxan tagaasida ah, tagaasida badan ayaa hadda si ula kac ah ugu sugaya aagag aan rasmi ahayn oo lagu hayo oo sugaya ballansasho. Natiijo ahaan, maalin wanaagsan waxaa suurtagal noqon karta inaad taksi qabsato oo aad ku timaaddo wax ka yar shan daqiiqo. Haddii ay tahay inaad gabi ahaanba aado meel waqti cayiman (dheh, garoonka diyaaradaha ama kulan), weli waxaa fiican inaad horay u sii qabsato taksi hudheel ah, iyo hel qiyaastooda sida xun ee taraafikada u noqon doonto.
Haweenku waa inay ku safraan gadaasha dambe ee taksiga maadaama darawalada qaarkood ay u arkaan casuumaad galmo haddii aad safka hore gasho.
Taksiileyda ayaa badanaa saaxiibtinimo leh, laakiin waxaa laga yaabaa inay leeyihiin fikrado ka duwan nadaafadda
Waxaa jira tiro aan la tirin karin oo ah Rent-A-Cars kuwaas oo bixin doona qaab gaadiid ah oo loogu talagalay qiimayaasha aadka u jaban iyo waraaqaha aadka u yar. Oggolaanshaha Darawalnimada Caalamiga ah daruuri maahan in loo baahdo, laakiin shirkadaha kireysta waxaa laga yaabaa inaysan kireysan gaari mid la'aan.
Hay'adaha qaarkood waxay kireysan doonaan baabuur dhameystiran oo wadayaal ah. Soo-booqdayaasha ka faa'iideysanaya ikhtiyaarkan waxay u baahan doonaan inay hubiyaan in darawalkoodu ogyahay jidkiisa sida inbadan aysan aqoon.
Markaad baabuur ku wado waddooyinka waaweyn, sida wadada Sheekh Zayed, lambarada isgoysku uma kala xigsanaan. Isgoyska 13-ka waa uun wixii ka dambeeya Isgoyska 18 waana dhif sida ku cad khariidadaha. Magacyada waddooyinka sidoo kale waxay noqon karaan kuwo aad u jahwareersan kala duwanaansho yar oo xagga hingaadda ah (oo ay ugu wacan tahay tarjumaadaha kala duwan ee Carabiga) oo aad muhiim u ah. Shaqada dhismaha ee ka socota guud ahaan iyo hareeraha Dubai waxay ka dhigi kartaa helitaanka meesha aad u socoto caqabad. Jadwalka ku-meelgaarka ah ee ku-meel-gaadhka ah ayaa isbeddelaya iyadoo si joogto ah looga naxo calaamadaha ku-meel-gaarka ahi waxay noqon karaan kuwo marin habaabin ama aan jirin. Maaddaama khariidadaha GPS aysan cusbooneysiin (oo badanaaba aaney jirin wax la kireysto oo la kireysto baabuurta la kireysto), waxaad sifiican ugu bixi doontaa khariidad daabacan (waxaad ka heli kartaa mid aad u fiican dukaamada Virgin, tusaale ahaan. Waxaa jira Virgin Megastore dabaqa sare ee Xarunta Magaalada).
Baabuur wadista inta lagu jiro saacadaha ugu sarreeya subaxdii iyo galabtii laguma talinayo, maxaa yeelay taraafikada ayaa gaabis ah oo istaaga xitaa safarka fudud ee buundada wuxuu qaadan karaa ilaa 45 daqiiqo. Sidoo kale meelaha gawaarida la dhigto ayaa ku yar xaafado badan oo magaalada ka mid ah.
Iyada oo ay isku jiraan jinsiyado degan magaalada, qaababka wadista ayaa isku dhafan in la yiraahdo ugu yaraan. Baabur wadida qatarta ah iyo qibrada leh labadaba markhaati ayaa loo noqon doonaa ama waaya aragnimo ayaa loo lahaan doonaa. Dubai waxay leedahay mid kamid ah heerarka ugu sarreeya ee dhimashada waddooyinka adduunka. Uma dulqaadan karno aalkolada iyo wadista ciqaab adag oo la soo saaray oo ay ku jiraan xabsi iyo masaafurin.
Ka eeg Salik wixii macluumaad ah ee ku saabsan toll jidadka qaarkood ee Dubai. Haddii aad kireysato baabuur, badiyaa taarikada Salik waxaa bixin doona shirkadda kireynta baabuurta waxaana lagaa qaadi doonaa lacag gooniya (caadi ahaan 5 dirham irid) markaad gaariga soo celineyso.
Gawaarida abra oo ka gudubta Dubai Creek min Bur Dubai ilaa Deira.
Hab fudud oo looga gudbo Dubai Creek waa abra, doon yar. Saldhigyada Abra waxay ku yaalliin hareeraha Creek ee labada dhinac ee Bur Dubai iyo Deira, nidaamka buuxinta doomaha ayaa si muuqata waxtar u leh. Safarka ka-gudubka wabiga wuxuu ku kacayaa 1 dirham, oo la siinayo darawalka ka dib marka ay doonta ka baxdo saldhigga, oo ay bixiso a muuqaal aad u qurux badan oo magaalada ah. Abras si joogto ah ayuu u baxayay, adeeggaasna waa la heli karaa saacad iyo habeenba.
Hawo-qaboojiye basaska biyaha waa hab looga fogaado dadka badan ee abra iyo kuleylka. Iyagu waa qayb ka mid ah nidaamka gaadiidka dadweynaha, markaa tigidh Casri Nol ah ama kaarka Nol ayaa loo baahan yahay. Tigidhada waxaa laga gadan karaa saldhigga basaska biyaha. Kharashka ku baxa waddo kasta waa 2 dirham. Baska biyaha ayaa sidoo kale leh 'safar dalxiis' safar wareeg ah - inta uu ku habboon yahay, wuu qaali noqon karaa (50 dirham qofkiiba, 25 dirham ilmihii).
Creek sidoo kale waa guriga doomo badan oo bixiya safarro raaxo leh (oo u dhigma kuwa ka qaalisan), badiyaa doomaha loogu talagalay inay u ekaadaan dhowska. Qiimayaashu waxay u muuqdaan inay ka sarreeyaan, gaar ahaan dalxiisyada casho ee madadaalada dusha sare.
Matxafka Dubai - qalcadda al-Fahidi iyo doon
Dubai waxay isugu jirtaa mid hore iyo mid cusub, mid dhaqameed iyo mid casri ah. Laga soo bilaabo souks dhaqameed hore iyo dhismayaal taariikhi ah (oo hadda loo xafiday sababo dhaqameed ama awalba qeyb ka mid ah dhaxalka qaranka) ilaa suuqyada waaweyn ee dukaamaysiga ee Dubai, jasiirado aan caadi ahayn oo macmal ah iyo dhismayaal casri ah oo waaweyn oo ay ku jiraan dhismaha adduunka ugu dheer, Dubai waa adduun laftiisa waxay bixisaa soo jiidasho badan oo cajiib ah.
Magaaladu waxay leedahay matxafyo fara badan iyo dhismayaal taariikhi ah, laakiin Matxafka Dubai waa waajib in la arko marka ugu horreysa ee socdaalayaasha Imaaraatka. Waxay bixisaa aragti ka mid ah noloshii hore ee Dubai, dadkeeda iyo dhaqankooda iyo hidahooda. Tiro kale oo matxafyo ah ayaa ku yaal meel u dhow Sharjah.
Dubai waxay leedahay sumcad xaq ah oo ah keyn la taaban karo, laakiin waxaa jira meelo badan oo cagaaran oo ku yaal magaalada dhexdeeda, sida Safa Park. Jardiinooyinka magaalada waa kuwo casri ah oo si wanaagsan loo dayactiray, oo kuwa ugu caansan ay ku yaalliin Jumeirah.
Maxaa laga sameeyaa Dubai
Abra fuul. Waxaa ugu wanaagsan habeenkii marka lagu jiro jawiga qabow iyo inaad ku raaxeysato nalalka magaalada. Abras ayaa loo kireysan karaa dalxiis gaar ah (qiimo lagula xaajoodo darawalka, laakiin badiyaa waa mid aad u jaban). Tani waa wax caan ah oo ku saabsan qorrax dhaca maalin cad, gaar ahaan haddii darawalku awoodo inuu ku soo nooleeyo socdaalka sheekooyin ku saabsan qaab dhismeedka labada dhinac ee Creek. Kaliya iska hubso in ujeedada kireysiga abraanka mid cad bilowga, haddii kale waxaad ku jiri doontaa safar qaali ah oo wabiga-ka-gudba ama safar qaas ah. Sidoo kale eeg qeybta sare ee 'Get around'.
Xeebaha iyo badda. Waxaa jira fursado isboorti oo aan dhammaad lahayn maadaama Dubai ay leedahay qaar ka mid ah kuwa ugu cadcad uguna nadiifsan adduunka. Heerkulka baddu wuxuu u dhexeeyaa 22 ° C xilliga qaboobaha illaa 35 ° C xagaaga, waxaa jira nasasho yar oo mowjadaha ah iyo dabaylaha xoogga leh ayaa ka dhigi kara dabaasha mid adag Biyaha sidoo kale waa kuwo aad u cusbo badan sidaa darteed qaar badan ayaa doorbida inay isticmaalaan barkadda dabaasha ee huteelka. Hawlaha quusitaanka waxaa si xun u saameeyay shaqada dhismaha badda ee baabacooyinka iyo Adduunyada; sidaas awgeed, safarada doomaha dhaadheer ayaa lagama maarmaan u ah in la gaaro goobaha burburka. Haddii kale, qofku wuxuu sameyn karaa safarka 90-ka daqiiqo ee wadada Imaaraatka ee Fujairah ama Sharjah enclave, Khor Fakkan, fasalka ugu sarreeya ee quusidda xeebta dhagaxyada ee taageera nolosha ballaaran ee badda.
Jidka orodka geela. Mid ka mid ah soojiidashada aan caadiga ahayn, iyadoo tartamada lagu qabto Khamiista iyo Jimcaha xilliga qaboobaha. Waad daawan kartaa tartamada, waxaadna fursad u heli doontaa inaad booqato paddocks. Iibiyeyaashu waxay iibiyaan wax kasta laga bilaabo kuul ilaa roogagga iyo bustayaasha, si aad u iibsan karto xusuus-qorrada.
Saxaraha lamadegaanka or dune bashing. U soo bax cidlada gawaarida SUV-ga leh darawallada takhasuska leh ee lamadegaanka. Darawallada ayaa kuu kaxeyn doona xiisaha xiisaha leh ee roogga dusha sare leh, waxay kaa tusayaan gabbaldhaca meel istiraatiiji ah ka dibna waxay kuu kaxayn doonaan xero dhaqameed Carabi ah oo Carabi ah halkaas oo laguugu soo bandhigi doono casho aad u fara badan oo hilib dub ah oo leh muusig toos ah iyo calool. qoob-ka-ciyaarka si loo dhammaystiro jawiga. Muddada socdaalku badanaa waa qiyaastii shan saacadood oo qofkiiba wuxuu ku kacayaa qiyaastii 150 dirham. Waxaad ubaahantahay inaad kafogto dhulka dumida godka hadii si fudud aad uhesho baaburta. Safari cidla ah waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee la sameeyo intaad ku sugan tahay Dubai. Ikhtiyaar kale ayaa noqon kara kireysiga / iibsashada 4 × 4 iyo ku biirista naadiyada badan ee 4 × 4 ee ka socda Imaaraadka, laakiin waa haddii aad tahay darawal khibrad leh oo aad haysato liisanka wadista caalamiga ah. Qaar badan oo ka mid ah waxay leeyihiin degello ay ka mid yihiin Emarat 4 × 4, Tour Dubai, iyo UAEoffroaders. Magaalooyinka deriska ah oo ay ku jiraan Abu Dhabi sidoo kale waxay leeyihiin magaalooyin u gaar ah, sida AD4x4. Dhammaan naadiyada ku saleysan Dubai, xubinnimadu waa lacag la’aan waxayna si joogto ah ugu sameeyaan safarro bilowga cidlada.
Bannaanka dabiiciga ah. In kastoo jaleecada hore banaanka ay u muuqan karaan caajis iyo xiiso la'aan, iyo xitaa qatar sababo la xiriira xaaladaha lamadegaanka, dhab ahaan waxaa jira meelo dabiici ah oo la yaab leh oo Imaaraatka ka tirsan Dubai, oo ku sii fidaya Hatta Waxaa jira biyo-dhacyo qallafsan, buuro dhaadheer oo ay weheliyaan haraaga, xitaa harooyinka biyaha macaan.
Xeerka Yacht. Hab fudud oo lagu sahamin karo Jasiiradaha Palm Islands ee dadku sameeyeen iyo daaraha dhaadheer ee xeebta. Maraakiibta ayaa laga heli karaa kireysiga Dubai Marina oo ka socda hay'ado badan oo jaartarka ah.
Dubai Creek dalxiis / raacid. Dubai Creek waa aasaaska ay Dubai ka koray. Waxaa loo dhisay inay noqoto dekedda maraakiibta ganacsiga ee u kala goosha kana yimaada Hindiya, Afrika iyo Bariga Dhexe. Maanta xoogaa ka mid ah dhaqankii hore ee maraakiibta ayaa wali ah. Gudaha iyo hareeraha Creek waxaa laga arki karaa qaar ka mid ah dhismayaashii asalka ahaa ee u adeegi jiray guryaha caadooyinka iyo dhismayaasha difaaca. Waad ballansan kartaa safar (badiyaa afar saacadood) markabka Dubai Marina ama waxaad kireysan kartaa doon khaas ah si ay kuugu kaxeeyaan safar saacad-dheer ah oo aad ugu soo degto Creek.
Burj Khalifa. Booqo dhismaha ugu dheer adduunka oo leh xarunta dhexe ee quruxda badan ee Dubai, Burj Khalifa waxaa ku hareereysan hoteello, waa inay booqdaan meelaha laga dukaameysto iyo adduunyo ikhtiyaarrada madadaalada ah. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa maqaalka degmada Jumeirah. (la cusbooneysiiyay May 2021)
golf. Waxay noqon kartaa lamadegaan, laakiin lacag badan iyo biyo ayaa lagu kharash gareeyaa waraabinta koorsooyinka golf-ka ee qani ku ah. Haddii kale, si aad u hesho dhadhan maxalli ah, iskuday golf ciid.
Fuulida Hawada Hawada kulul (Balanbaal Adventures Dubai),. 8 Sebt - 31 Maajo. Farxad weyn markii la arko dhammaan ciidda iyo buuraha subaxa hore ama qorrax dhaca. 1,100 dirham / qof weyn, 950 dirham / ilmo. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Safarka Shirkadda Big Bus. Waad ku dalxiis tagi kartaa baska, labada maalin iyo habeenba, ee soojiidashada badan ee Dubai.
In kasta oo Dubai ay isku dayeyso inay isku dhiirrigeliso inay tahay caasimadda ganacsiga iyo madadaalada adduunka, haddana dowladdu waxay leedahay nidaam adag oo mararka qaarkoodna lagu carqaladeeyo ruqsadda shaqada oo aan qofna iskood isku dayin inuu waayo-aragnimo hore u leeyahay mooyee. Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in la maro wadiiqooyin rasmi ah marka shaqo laga raadinayo Dubai maaddaama kormeeridda goobahu ay yihiin kuwo soo noqnoqda oo haddii lagu helo inay si sharci darro ah ku shaqeeyaan, shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha labadaba waxaa lagu ganaaxi doonaa ganaax iyo xitaa masaafurin.
Dhammaan foomamka iyo dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah waxaa lagu qoraa oo lagu shaqeeyaa Carabi waxaana ugu fiican in loo daayaa xirfadle ama "PRO" si uu u maareeyo waraaqahaaga.
Waxaa jira sharciyo ku saabsan beddelaadda shaqooyinka, oo khuseeya jinsiyadaha. Waa inay dhammaystiraan muddada qandaraaskooda, oo ah 2 sano. Haddii shaqaaluhu jebiyo qandaraaskiisa / qandaraaskeeda kahor dhammeystirka 2 sano, loo-shaqeeyaha cusub waa inuu u fidiyaa mushahar ka sarreeya 5,000 dirham si looga fogaado xayiraadda. Haddii kale shaqaaluhu waa inuu sugaa illaa laga dhammaystirayo inta ka hartay bilaha qandaraaskiisa la kansalay. Haddii loo shaqeeyaha uu jebiyo qandaraasyada, markaa shaqaaluhu wuxuu ku biiri karaa loo shaqeeye kale isla markiiba iyada oo aan loo eegin jinsiyadda, diinta, diinta ama caqiidada.
Iyada oo qiimaha kirada waligiis uu sare u kacayo Dubai iyo deriska la ah Imaaraatka, waa fikrad fiican in laga wada hadlo gunnada guryaha marka laga hadlayo guntinta lacag bixinta.
Iyada oo ay waxaas oo dhami jiraan, haddana waxaa jira waxoogaa isbeddello ah, shirkadaha Dubai waa deeqsi fasaxyo celcelis ahaan u dhigma ku dhowaad 39 maalmood sanadkiiba oo fasax ah (oo ay ku jiraan ciidaha caamka ah), tikidh safar celis ah oo sanadkiiba mar guriga loo maro (taas oo ku xidhan qandaraaskaaga) iyo dawladda Imaaraadka. kuma saamaxayso canshuuraha dakhliga shaqaalaha ajaanibta ah. Taa baddalkeeda waxay ku soo rogtaa khidmad iyo kharash ku dhowaad wax kasta, sidaa darteed qiimaha ku noolaanshaha Imaaraadka, iyo gaar ahaan Dubai, waa mid aad u sarreeya.
Khayaanada shaqaalaynta ayaa ku baahsan qaybtaan adduunka ka mid ah. Si taxaddar leh u aqri heshiiskaaga shaqada ka hor intaadan saxeexin oo ha bixin wax khidmad ah hay'adaha shaqaalaynta, maadaama inta badan ay bixiyaan shirkadaha. Baasaboorkaagu waa hantidaada shaqsiyeed mana ceshan karo shaqo-bixiyaha illaa aad ku jirto boos aamin ah ama aad gacanta ku hayso lacag aad u tiro badan.
Dubai waxaa ku eedeeyay ururo badan inay si wax ku ool ah u addoonsadeen shaqaalaha ka soo jeeda Koonfur-bari Aasiya iyagoo u oggolaanaya shirkadaha inay qaataan baasaboorradooda iyaga oo aan soo celin isla markaana u oggolaanaya mushaharka in aan la bixin. Shaqaalaha ajnabiga ah, kuwa reer galbeedka iyo kuwa kaleba, ma lahan xuquuq ay maxkamaduhu taageeri doonaan, sidaa darteedna ma haystaan ​​wax ay ku helaan haddii ay dareemaan in xuquuqdooda lagu xadgudbay. Shaqaalaha suurtagalka ah waa inay ka warqabaan tan markay ka fiirsanayaan inay ka shaqeeyaan Dubai.
Wax kasta oo dhalaalaya is dahabka Dahabka Souk.
Dubai waxay ficil ahaan la mid tahay dukaamaysiga waxaana loogu yeeri karaa "Do buy". Canshuuraha hooseeya iyo xamuul aad u tiro badan oo maraya dekeddeeda waxay xaqiijinayaan in ficil ahaan wax walba lagu heli karo sicir cadaalad ku dhisan, inkasta oo qadarinta Dirham iyo soo iibsiga badan ee dukaamadu ay ka dhigan tahay in Dubai aysan hadda ahayn magaalo wax iibsiga gunta hoose. Waxa kale oo aad ka heli doontaa badeecooyin dukaamada silsiladaha reer galbeedka, oo wali wata astaamaha asalka ah ee soo qaadanaya euro ama qiimaha ster, lagu iibinayo calaamadeynta 20-30% marka loo beddelo dirham. Waxyaabaha ugu fiican ee la iibsado waa dharka, korantada iyo dahabka; elektiroonigga ayaa la rumeysan yahay inuu aad uga jaban yahay, halka ay jiraan xulasho ballaaran oo dhar iyo dahab ah.
Dukaamada Dubai waxay la ildaran yihiin heerka ganacsiga soo koraya ee adduunka soo koraya oo ah bakhaar la'aan iyo keyd la’aan keyd ah, xitaa meheradaha waaweyn - iyo dhar u adeegashada tani waxay macnaheedu noqon kartaa inaad ku dhibtooneysid helitaanka qaabka aad rabto cabbirka aad rabto. Dukaammadu waxay furmaan goor hore 09:00 waxayna furan yihiin 22:00, iyo maalmaha fasaxa ah ilaa habeenbadhka ama 01:00.
Xusuusnow inaad dhex gasho soukooyinka, maadaama qiimo jaban had iyo jeer la heli karo iyo xitaa xaaladaha aan sheygu wax badan ka jaban doonin, macaamilka waxaa had iyo jeer laga rajeynayaa inuu "ciyaaro ciyaarta" jabsiga. Su'aal fudud oo ah "waa maxay qiimaha kuugu fiican?" badanaa waxay keeneysaa in dukaan-ilaaliye uu aado dherer aan caadi aheyn si uu u iibiyo keydkiisa. Qiimaha dukaamada iyo dukaamada kale ee reer Galbeedku uma muuqdaan kuwo gorgortan laga geli karo. Marka laga reebo inuu yahay wax xun, tani waxay u oggolaanaysaa booqdaha canny inuu ka shaqeeyo qiimaha isbarbardhiga xusuus-wadareedyada - kaalmo qiimo leh marka dukaan-ilaaliye ku jira sook uu codsanayo qiimo sare.
Bandhigyada Dukaamaysiga ee Dubay ayaa ahayd dhacdadii ugu weyneyd ee wax laga iibsado ee Bariga Dhexe tan iyo 1996. Ku dhowaad dukaan kasta wuxuu leeyahay iib, laga bilaabo Janaayo iyo dhammaadka Febraayo. DSF kuma koobna oo keliya Dukaameysiga laakiin sidoo kale waxay soo saartaa qaar ka mid ah heerarka maskaxeed ee maskaxda iyo bandhigyada ay soo bandhigaan dadka caanka ah ee caalamiga ah. Waxaa sidoo kale jira wax aad u eg Dhacdooyinka xagaaga ee Dubai isku dayaya in ay soo jiidaan punters inta lagu jiro xilliga xagaaga hooseeyo.
Isha isha ganacsiga ee Dubai
Dubai waxay caan ku tahay suuqyo waawayn waxayna magnet u tahay dadka wax iibsanaya. Tobannaan xarumood oo waaweyn, laba ayaa istaaga cabirkooda iyo tayadooda darteed. Ka eeg qodobbada degmada faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan suuqyada waaweyn. Dhowr suuq ayaa leh supermarket weyn halkaas oo aad ka heli doonto qalabka elektarooniga ah ee ugu jaban, iyo raashin aad iskood ugu adeegatid. Waxaa jira dukaamo waaweyn, iyo noocyada caalamiga ah sida Carrefour, Géant iyo Waitrose waxay leeyihiin goobo badan sida 'guryaha lagu beero' noocyada Choithrams, Spinney's, Union Co-Operative iyo Lulu, iyo kuwo kale.
Shawarma waa cuntada ugu badan ee laga heli karo dhammaan waddooyinka (oo raqiis ah) Dubai. Waa Carabi u dhiganta burger. Waa hilib lagu kariyey qalfoofka ka dibna jarjar dhuuban oo la galiyay kuhbus (pita) rootiga leh khudaarta iyo labiska. Waxay ku kacaysaa qiyaastii 5 dirham labada nooc ee kala-jane ama noocyada qalaad ee Lubnaan iyo Iiraan. Shawarma ay iibiyaan maqaayadaha Hindida ayaa la oran karaa waa kuwa ugu raqiisan.
Cunto fudud oo kale oo maxalli ah ayaa ah fala-fil (felafel, falafel), oo raqiis ah sida shawarma.
Inta badan silsiladaha cunnooyinka degdegga ah ee Mareykanku waxay samaysteen dukaan, oo ay ku jiraan KFC, Chillis, Jimcaha TGI, Starbucks, iyo McDonalds. Quruxda cunnada ee Dubai waa inaad u badan tahay inaad ka heli doonto cunno cunno kasta oo dhadhan ah. Cunnada oo dhami waa xalaal.
Dubai waxay leedahay xulasho weyn oo miisaaniyada cuntada Hindida ah. Dosa, vada, idlee, samosa, chapaati / roti, oo leh adeegyo badan oo sabji ah (fuud khudradda la kariyey) ayaa lagu heli karaa qiimaha tuurista, oo sida caadiga ah ka yar 10 dirham halkii koorso. Waxyaabaha qaaliga ah waxay ku kacayaan illaa USD 5. Bur Dubai (gaar ahaan Meena Bazaar area) iyo Karama waa meelaha ku badan makhaayadahaas. Intooda badani waxay furan yihiin laga bilaabo 07: 00 illaa 22: 00 ama 23: 00.
Xarumaha ganacsiga badankood waxay leeyihiin maxkamado cunno, kuwaas oo bixiya menus qiimo wanaagsan waana ikhtiyaar deg deg ah oo la isku halleyn karo oo loogu talagalay booqdayaasha iyo dadka deegaanka. Waxa kale oo jira silsilado dhowr ah oo raashin ah oo noocyo badan leh (Pakistani, Indian, burger) oo ku baahsan magaalada oo dhan. Eeg qodobbada degmada wixii talooyin shakhsi ah.
automatic, kani waa silsilad makhaayadaha Lubnaan caan ah oo laga helay Dubai oo dhan. Caan ku ah googooheeda wan & jimicsi qadada jimcaha.
Hoteelada ugu sareeya dhammaantood waxay leeyihiin ugu yaraan hal makhaayad oo u adeegta (badiyaaaba) nooc ka mid ah noocyada cunnada caalamiga ah - Talyaani, Jabbaan, Hindi iyo wixii la mid ah. Tayada waxay u egtahay inay sarreyso, oo ay weheliso qiimo, laakiin kuwa aan martida aheyn waxay awoodaan inay keydsadaan miisaska sidoo kale, sidaas awgeedna inta kale ee naga mid ah inaan la kulanno xoogaa hudheeladan ah. Makhaayadaha dul sabeynaya ee cashada ayaa lagu arkaa Dubai Marina sidoo kale waxay caan ku yihiin dadka aan socotada ahayn iyo kuwa safarka ah. In yar oo ka mid ah wakaaladaha sida Trilogy-Yachts & Nalora Cruise ayaa leh makhaayado ruqsad ruqsad haysta oo markaa qiimo sarreeya ka qaata tayada cuntada iyo adeegga.
Xagee lagu joogayaa Dubai
Gudaha Hotelka Burj al-Arab
Bilowgii 2000-meeyadii dalabyadii qolalka hudheelku way ka sareeyeen sahaydii, taasoo keentay in qolalka ugu qaalisan adduunka: ay adkayd in la helo wax wanaagsan oo ka hooseeya 600 dirham (US $ 150) gaar ahaan xilligii sare ee Sebtember-Meey. Sababtoo ah koror ballaaran oo qolalka hudheellada ah iyo xiisadaha dhaqaale, keliya xilliyada ciidaha Islaamka ayaa qiimuhu aad kor ugu kacaa. Meelaha ugu raqiisan, inta badan wax u qabashada ganacsatada yar-yar, waxaa laga heli karaa agagaarka sooks-ka Deira. sidoo kale waxaa ku yaal hoteel dhalinyaro ah iyo hostel backpackers Dubai.
Ka eeg liistada shaqsiyeedka degmo talooyinka hoteelka. Guud ahaan dalxiisayaashu waxay u muuqdaan inay joogaan hoteelada xeebta ee Jumeirah ama Jebel Ali, halka dadka ku nool magaalooyinku ay leeyihiin xulasho ku filan Deira ama Bur Dubai. Dubai waa waddo xeebeedka tagaasida waa raqiis iyo metro lagu kalsoonaan karo, sidaa darteed had iyo jeer waxaa jira xulashooyin kale. Dhibaatooyinka kaliya ayaa ah goobaha dhismaha weligood-cusub iyo saacadda degdegga ah. Inta lagu jiro kuleylka xagaaga hudheel marin u leh suuq weyn ama dukaamaysi ayaa faa'iido u leh in la helo meel ballaadhan oo socodka qaboojiyaha leh.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Dubai
Dubai waa magaalo si xawli ah u koraya oo leh qayb ka mid ah dhibaatooyinka laakiin ma jiro wax isticmaalka caqliga saliimka ahi kama maarmi karo.
Darawalnimada iyo nabadgelyada dadka lugeynaya ayaa sidoo kale ahayd arrin la siiyay jinsiyadaha kala duwan ee wadada wadaaga. Ha ku dhaafin jaywalk ama ha dhaafin meesha aysan kujirin calaamadaha dadka lugeynaya. Xawaaruhu waa wax iska caadi ah halkan, oo fursadahaaga in lagaa tuuro aad ayey u sarreeyaan ilaa aad raacdo xeerarka mooyee. Iska ilaali inaad ku wadato dariiqa bidix ee daran ee waddooyinka waaweyn si aad uga fogaato “dhalaalka” iyo inaad ku qasabto inaad marin haad ka gudubto. Xanaaqa wadada ayaa sidoo kale bilaabay inuu noqdo arin la ogyahay kororka saxmada gawaarida iyo edeb darada darawalnimada
Dhaqdhaqaaqa gacanta oo aan fiicnayn (“farta”, iwm.) Iyo afxumadu waxay u horseedi karaan ganaaxyo iyo xabsiyo haddii la soo sheego, markaa qabow ha ahaato haddii lagaa jaro ama aad ka dambeyso darawal qalad ah. Guud ahaan, waxaad ka heli doontaa tilmaamahaas iyo ficiladaas oo qaarkood laga yaabo inay wax yar uun ka weeraraan waddankaaga hooyo, ama laga yaabee inaanay gabi ahaanba weerarin, mararka qaarkood waxay si aad ah u weerari karaan dadka reer Dubai. Sidaa darteed, adeegso heer caqli-gal ah oo ah waxa saxda iyo qaladka ah si ay kaaga caawiso inaad dhibaatada ka fogaato.
Isutagga Imaaraatka Carabta wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay sharciyo dabacsan marka loo eego dhiggooda kale ee Carbeed, laakiin sharciyada ayaa wali aad uga duwan dalalka reer Galbeedka badankood, sharciyadoodana si adag ayaa loo dhaqan geliyaa Dhunkasho fudud oo ka dhacda meel fagaare ah, inaad khamri ku cabto meel khaldan ama xitaa xanaaqa ayaa kaa dhigeysa bil ama in ka badan oo xabsi ah. Ka taxaddar taxaddar iyo caqli gal ah markaad booqanayso, oo hubi inaad ka warqabto sharciyadooda oo dhan ama aad filaneyso cawaaqib xumo aad u daran oo dhaawici karta booqashadaada.
Dubai waxay si adag u raacdaa sharciyada Islaamka oo ay tahay inay ixtiraamaan dhammaan martida. Islaamku waa diinta rasmiga ah, sidaa darteed si cad ha u cambaareyn ama ha u qaybin waxyaabo ka dhan ah. Cunitaanka bulshada dhexdeeda inta lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan lama oggola qorrax ka soo baxa ilaa ay qorraxdu ka dhacayso dadka soo booqanayaana waa inay ku cunaan meelaha ku yaal hudheelkooda ama degggooda.
Wadahadalka ku saabsan siyaasadda iyo arrimaha adduunka, iska ilaali inaad canaanato qoyska xukuma mid ka mid ah toddobada Imaaraad ama qoysas ganacsi oo caan ah.
In kasta oo dembiyada yaryar aan si dhib leh loo soo sheegin ama loogu xusin wararka, isha ku hay boorsadaada ama boorsadaada marka aad ku sugan tahay meelaha dadku ku badan yahay sida Naser Square ama Deira guud ahaan. Haddii lacag badan lagala baxo ATM-yada ama hay'adaha bangiyada, ama qari waraaqaha ama weydii hay'adda amniga inay kuu raacaan gaarigaaga. Kiisaska ayaa dhacay halkaasoo dadka looga dhacay lacago badan markii ay ku sugnaayeen meelaha dadku ku badan yahay sababtoo ah ma aysan taxaddarin.
Conmen waligood waxay joogaan Dubai, gaar ahaan kuwa khiyaanooyinka sameeya "Nigeria 419". Ha qaban qaabin shirarka ama ha marti qaadin codsiyadooda ama ha bixin faahfaahin shakhsi ah. Haddii aysan u hoggaansamin, shaqsiyaadka ku farxi doona inay dhageystaan ​​soo jeedintooda ganacsi waa booliska.
Waad ku mahadsan tahay kor u kaca hantida iyo bustka cusub ee Dubai, dadka wax khiyaameeya guryaha ayaa sidoo kale soo baxaya, sidaa darteed taxaddar weyn samee haddii aad xiiseyneyso inaad iibsato ama kireysato.
Isticmaalka daroogada iyo qeybinta waa dambiyo culus oo dambi ah, xitaa marka lala joogo qofka wax cunaya, waxayna u horseedi kartaa xabsi dhowr sano ah ama xitaa ka hor kooxda toogashada. Bagaashka rakaabka si fiican ayaa loo baaraa marka la galayo Dubai. Xitaa dawooyinka dhakhtarku qoro (warqad dhakhtar la'aan asalka ah iyo mararka qaarkood xitaa midkood) ama kuwa aad ka iibsatay miiska dabka ee wadankaaga waxay kuu horseedi karaan xukun xabsi ah.
Waxaad u baahan tahay inaad taxaddar sameyso markaad dalxiis ku tahay Dubai, sida meelo badan oo adduunka ah, dadku waxay isha ku hayaan dalxiisayaasha waana ku khiyaanayn karaan. Tusaale ahaan wadayaasha tagaasida ayaa waddo dheer u mari kara meesha loo socdo madaama aad mitir ku bixiso ama aad isku daydo inay kaa qaadaan 20 doolar markii aad hubto inaad maqashay iyagoo leh 20 dirham: (waxay ku dhawaqaan si la mid ah).
Lambarka caalamiga ah ee Imaaraadku waa +971, Dubai, kudar 4 kadib khadadka dhulka.
Nambarada taleefanka gacanta ee deegaanka waxay ka bilowdaan + 971 50 xxx yyyy ama + 971 56 xxx yyyy bixiyaha GSM Etisalat iyo + 971 55 xxx yyyy bixiyaha GSM Du.
GSM - Kuwa haysta taleefannada GSM waxay ka filan karaan meertada gawaarida dalalkooda. Maaddaama khidmadaha wareega ay aad u sarreeyaan (si fudud 3 doolar daqiiqaddii iyo badanaa in ka badan wicitaan Yurub) iyo wicitaannada soo gala sidoo kale waa la qaadaa, tixgeli inaad iibsato kaarka maxalliga ah ee GSM SIM, oo loogu talagalay gaar ahaan dalxiisayaasha, mid ka mid ah labada bixiyeyaasha gacanta. Imaaraadka:
Etisalat - alaabta Ahlan - 90 dirham - oo laga heli karo Dukaanka Bilaashka ah ee Duty (hoolka imaatinka) ee Madaarka Dubai
Du - Khadka Soo-booqdaha Soo-booqdaha ee alaabada - 70 Dirham - waxaa laga heli karaa Telefonika dukaan ku yaal hoolka imaatinka ee Madaarka Dubai.
Isticmaalka alaabtan, wicitaanada Yurub waxaa lagaa qaadayaa ugu badnaan qiyaastii 0.55 USD daqiiqadii. Wicitaanada soo socdaa waa lacag la’aan.
Waababka taleefanka - Waababka taleefannada ayaa ku yaal waddooyinka badankood. Kaararka taleefanka waxaa laga iibsan karaa hoteelada iyo dukaamada dalxiiska.
Internet - kafateeriyada internetka way adkaan kartaa in la helo. Heerka caadiga ah saacaddii waa 3-4 dirham. Waxaa ku yaal maqaaxiyo dhowr ah Al Musalla Road / Al Mankhool Wadada Bur Dubai, oo ay ku jiraan mid ku yaal 38 Al Musalla Road iyo mid ku yaal Computer Plaza oo ku dhegan Hotel Ramada. Tiro ka mid ah makhaayadaha internetka ayaa laga helaa Satwa sidoo kale. Magaalada Satwa waxaa ku yaal Xiriirka Faransiiska ee Al Wafa Tower ee ku yaal wadada Sheikh Zayed (dhinaca ka soo horjeedka wadada ee ka timaada Hotel Dusit), oo leh marin-u-helid wi-fi ah iyo keegag / keegyo wanaagsan. Al Qusais, waxaa ku yaal makhaayad internet ah oo 5 daqiiqo socod ah woqooyi-galbeed ka socota hoyga dhalinyarada ee Dubai. Midig uga leexo irdaha una soco LuLu's Hypermarket. Makhaayaddu waxay ku taal gudaha maxkamadda cuntada waxayna kaa qaaddaa 4 dirham saacaddii. Websaydhka Skype ayaa xanniban.
Makhaayadaha lagu cayaaro ee loogu talagalay dhalinyarada ayaa hareeraha hareeraha ka ah, tusaalooyin xusid mudan oo ay ka mid yihiin aagga ciyaarta ka baxsan (ka soo horjeedka lulu hypermarket ee al barsha), Que club oo ku yaal al barsha iyo ka dambeeya Lamcy plaza.
Waxaa la yaab leh in suuqyadu aysan lahayn kafateeriyada internetka. Dubai Mall waxay bixisaa Wi-Fi bilaash ah oo dhan. Mall of Emirates waxay bixisaa Wi-Fi bilaash ah, laakiin waa inaad haysataa lambarka taleefanka maxalliga ah. Dukaamo badan oo qaxwe, makhaayado iyo meelo soo jiidasho leh ayaa sidoo kale leh Wi-Fi bilaash ah, badanaana waa inaad weydiisataa furaha sirta ah. Inta badan Xarumaha ganacsiga hoteellada waxaa lagu qalabeeyaa maqaaxiyaha internetka, laakiin waa qaali.
Etisalat, Shirkada isgaarsiinta ee Imaaraatka, waxay soo bandhigeysaa meertada, boostada bixisa Wi-Fi internet-ka oo lacag lagu bixiyo iZone . Inta badan dukaamada kafeega iyo suuqyada ku yaal Dubai oo dhan waxay bixiyaan adeeggan. Qiimaha waxaa laga heli karaa websaydhka. Kuwa wali isticmaalaya internetka garaacitaanka Etisalat waxay bixiyaan adeeg markii aad ku xirmi karto khadka taleefan kasta khadka waxaa lagaa qaadayaa 0.5 dirham daqiiqadii
Garoonka Dubai International (DXB) waxay ku leedahay Wi-Fi bilaash ah boosteejada. Keen laptop-kaaga si aad ugu isticmaasho Wi-Fi bilaash ah hoteelada qaarkood. Waxaa jira goobo badan oo Wi-Fi ah oo bilaash ah oo ku yaal Dubai.
Emirates Post adeeggu waa mid hufan. Waxaad u baahan doontaa inaad kireysato PO Box maadaama adeegga boostada ee albaabku uusan ahayn heerka.
Wargeysyada iyo raadiyaha
Waad ku mahadsan tahay qulqulka badan ee qurbajoogta, Dubai waxay leedahay xulasho ballaaran oo wargeysyo ku baxa luuqadda Ingiriiska ah iyo kanaallo idaacadeed.
Ganacsiga Emirates 24/7.
Kanaalka 4 - Wuxuu heesaha heesaha haatan ka socdaa Ingiriiska iyo Mareykanka. 104.8FM
Dubai Eye - Hadalka reer galbeedka ee ku wajahan ganacsiga, isboortiga, qaab nololeedka iyo madadaalada. Waxaa iska leh Shabakada Raadiyaha Carabta. 103.8FM
Dubai 92 - Muusiggu wuxuu u badnaa 90. Caan ku ah ajaanibta Ingiriiska. Waxaa iska leh Shabakada Raadiyaha Carabta. 92.0FM
Virgin Radio 104.4 - Muusigga jaantuska. Waxay ku shaqeysaa rukhsad ka socota Idaacadda Caalamiga ah ee Virgin Radio. Waxaa iska leh Shabakada Raadiyaha Carabta.
Magaalada 101.6 - Waxay baahisaa muusikada Hindida.
Abu Dhabi Classic FM - In kasta oo magaceedu yahay, idaacaddani waxay ku baahisaa dhammaan muusikada imaatinka ah iyo jazz-ka guud ahaan UAE. Dubai gudaheeda waxay ku taal 87.9FM
Wargeysyada Caalamka sidoo kale waxaa laga heli karaa inta badan hoteelada iyo garoonka diyaaradaha. Dukaamada buugaagta Carrefour iyo Border ayaa iibiya wargeysyada Ingiriiska iyo Mareykanka. Si joogto ah, guri madbacadeed oo maxalli ah, ayaa siin kara joornaalada iyo joornaalada ka soo baxa adduunka maalin kasta.
Qunsuliyadaha ku yaal Dubai
Dubai waxay hoy u tahay dad badan oo jinsiyado kala duwan leh iyo luqado kala geddisan. Sidaa darteed, dalal badan ayaa ka aasaasay qunsuliyado adeeg buuxa (Qunsuliyadda Guud) magaalada Dubai si ay u siiyaan adeegyo qunsuliyadeed muwaadiniintooda ku nool UAE ama meelaha qaarkood sida Dubai iyo waqooyiga Emirates, iyo sidoo kale adeegyada fiisaha ee dadka kale ee doonaya inay booqdaan dalalkooda ( haddii loo baahdo). Qunsuliyadaha badankood waxay ku yaalliin / hareeraha Al Karama iyo Um Hurair (degmada qunsuliyadda) ee degmada Burr Dubai, koonfurta Dubai Creek. Waxay sidoo kale ku yaali karaan qaybaha kale ee magaalada sidoo kale. Haddii ay u dhigantaa boostada / boostada u isticmaal cinwaankooda sanduuqa 'PO' maadaama boosta loo geeyo oo keliya Sanduuqa PO oo aan lahayn lambarro boosto. Haddii aad u direyso cinwaan waddo oo ay la socdaan DHL, FedEx, UPS ama warqad kale oo gaar loo leeyahay hubi inaad ku darto lambarka taleefanka qaataha si darawalka geynta uu u soo waco tilmaamaha ama caddeynta cinwaanka. Wadamada qaar ayaa laga yaabaa inaysan qunsuliyad ku laheyn Dubai laakiin halkii ay ka qaban lahaayeen wax walba oo ka yimaada jaaniskooda Abu Dhabi, halka kuwa kale ay u xilsaaraan waajibaadkooda qunsuliyada kaliya qunsuliyada Dubai. Hubi boggooda xiriirinta ama wac kahor intaadan aadin ama u dirin wixii waraaqo ah:
Australia, Niv 25 124400, Bur Juman Business Tower, Wadada Khalifa Bin Zayed; PO Box XNUMX,, fax: + 971 4-355 1547.
Bangladesh, Villa No. 36 & 145 Abdulla Hussain Al Malik Villa 123/3 Street, Abu Hail Road Al Wuheida, Deira; PO Box 4366,. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Canada, Dabaqa 19aad ee Dhismooyinka Jumeirah Emirates (Dhismaha Ganacsiga), Wadada Sheikh Zayed; Sanduuqa PO,. Su-Th 08: 00-12: 00 & 13: 00-16: 00; Su-Th 08: 00-14: 00 inta lagu jiro Ramadaanka. By appt kaliya. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Shiinaha, Villa No. 14, St 8, Beesha 357, Umm Al Sheif St, Safa 2 Aagga,, fax: + 971 4-3952207. Su-Th 08: 30-12: 00.
Masar, Al Xamariya, Khaled Ibnu Al-Waliid Street,, fax: + 971-4-3971033. Axad-Khamiis 09:00 - 15:00.
Itoobiya, Deira, Al Wuheida, Beesha 132, Wadada No. 6, Villa No. 1,. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
France, 32F Habtoor Business Tower, Dubai Marina, Jumeirah xeebta Wadada; PO Box 3314 (ka soo horjeedka Grand Habtoor Hotel, oo ku dhow saldhigga mitrooga ee Dubai Marina),, fax: + 971 4 408 4903, + 971 4 408 4904. Maalin kasta 08:30 AM-12:30. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Germany, Jumeira 1, 8 'A' St.,. Su-Th 08: 00-12: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hindiya, Al Hamariya, Dibloomaasiyadeed, Bur Dubai; PO Box 737,, fax: + 971 4 394 0453. Su-Th 08:30 AM-16:30.
Indonesia, Al Hudaiba, Beesha 322, Villa No. 1,. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Iiraan, Maya 256 Wadada Al Wasl, Deegaanka Jumairah; PO Box 2832,. Su-Th 08: 00-12: 00.
Ciraaq, PO Box 85855 (Bur Dubai),. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Japan, Dabaqa 28aad, Xarunta Ganacsiga Dunida ee Dubai,, fax: + 971 4 331 9292. Su-Th 09: 00-14: 30; joojiso qaadashada codsiyada fiisaha 12:30; soo celi shaqadii la dhammaystiray inta udhaxeysa 12: 30-14: 30. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Kenya, Jumeirah 2, Wadada Al Wasl, Wadada 15, Villa 5; PO Box 214933,, fax: +1 971 4-342 8181. Su-Th 09: 00-13: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Kuwait, Wadada Al Seef; PO Box 806,. Su-Th 08: 30-14: 30. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Netherlands, Dhismaha Ganacsiga ee Al Habtoor, dabaqa 30aad, Dubai Marina; PO Box 7726,. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Cumaan, PO Box 1898,. Su-Th 07: 30-14: 30; Codsiyada Visa 08: 00-12: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Pakistan, Meel u dhow Burjuman, opp. Iskuulka Iran, Ummu Hurair One, Khaalid Bin Waliid Wadada, Bur Dubai,, fax: + 971 4-397 1975.
Filibiin, Al Qusais 3 Dubai; PO Box 94778,. Su – Th 08: 00-14: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Russia, Dubai, Umm Al Sheif, 6B st., Villa 21: PO Box 11876,, fax: + 971 4 328-5615. Su-Th 10: 00-13: 30; Soo saarista Jinsiyadda Arbaco 15: 00-17: 00. Xarunta codsiga fiisaha waxay ku taal meel kale oo ku taal Wafi Mall, Heerka 2, Falcon Phase 2, Umm Hurair 2, Dubai (Tel +971 4 205-5717 (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Saudi Arabia, Aagga Alhamreiah, Wadada Alsaeef,. Su-Th 09: 00-15: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Koonfur Afrika, Wadada Khaalid Bin Al Waliid (oo sidoo kale loo yaqaan Bank Street) (Sharaf Bldg cusub oo ku yaal Bur Dubai),, fax: + 971 4 397-9602. Su-Th 08: 30-12: 30. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Turkey, Dabaqa 29aad, Dhismaha Xarunta Ganacsiga Dunida ee Dubai ، Sheikh Zayed Road,. Su-Th 08: 30-14: 00 (Waxaa leh Appt oo keliya). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Boqortooyada Ingiriiska, Al Seef St Bur Dubai; PO Box 65 (Meel u dhow Dubai Creekside),, fax: + 971 4 309 4301.
United States (USA), Geeska Al Wadada Wadada Al Seef. iyo Sheikh Khalifa bin Zayed Road,,.
Yemen, Qunsuliyadaha Aagga, Um Hurair 1; PO Box 1947,. Su-Th 08: 30-14: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Gudaha Imaaraadka Carabta:
Deriska Sharjah. In kasta oo qalalan (aalkolo la'aan) iyo inta badan hareeraha magaalada, waxay leedahay dhowr xeebo iyo matxafyo xiiso leh. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Abu Dhabi. Magaalada Emirate-ka, waa magaalo gebi ahaanba ka duwan oo u qalanta hal saac iyo bar raacid si loo arko kala duwanaanshaha. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Magaalada Al Ain (u dhow xadka Cumaan). Waa wax la yaab leh oo ah magaalo leh jardiinooyin iyo geedo cagaaran - oo ah arrin aan caadi ahayn gobolkan marka la fiiriyo hareeraheeda cidlada ah. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Imaam al Quwain oo nabad ah. Haddii aad rabto jawi raaxo leh oo nasasho leh, oo ka madax bannaan buuqa magaalada. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Dubai waxay heshiis kula jirtaa Cumaan si loogu oggolaado booqdayaasha u qalma inay helaan fiiso Cumaan markay imaadaan iyagoo sii maraya Hatta.
Jasiiradda Iish ee Kish. Aag ganacsi oo xor ah oo aan u baahnayn fiiso. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Fjords of Musandam Peninsula (laba saacadood woqooyi u raaca qafiskan Cumaan). Baadh boholo qurxoon oo ku raaxee muuqaalka wanaagsan ee macmacaanka iyo buuraha. si aad ugu lugeeysid buuraha ama aad ugu dhex quusto fjords. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Jidka Khaalid Bin Waliid, Dubai, Imaaraadka Carabta
ABC Arab Suites Dubai
Apid Hotel Abidos Al Barsha
Guryaha Al Barsha Hotel
Al Bustan Center & Deganaanshaha Dubai
Guryaha Al Deyafa Hotel Dubai
Al Ghurair Rayhaan By Rotana - Hotel Dubai
Guryaha Fasaxa ee Al Khaleej Dubai
Al Murooj Rotana - Hotel Dubai
Al-Xijaas Motel Deira Dubai
Maxkamadda Carabta Mid & Kaliya Royal Mirage Hotel Dubai
Hoteelka Carabiya ee Hoteelka & Spa Dubai
Arabian Dreams Hoteellada Dubai
Arab Hotel Park Dubai
Carbeed Ranches Golf Club Dubai Hotel
Hoteelka Ascot Apartment Dubai
Hoteelka Ascott Park Place Dubai
Guryaha Auris Hotel Aira
Hoteelka Avari Dubai
Belvedere Court Hoteellada Dubai
Champs Elysees Hotel Magaalada Dubai
Guryaha Chelsea Tower Dubai
Xilliyada Magaalada Suites Dubai
Dhismooyinka Hotelka City Tower Dubai
Hotelka Copthorne Dubai
Guryaha Coral Boutique Hotel Dubai
Barxadda Dubai Green Community Hotel
Crowne Plaza Hotel Magaalada Dubai
Lamadegaanka Palm Dubai
Hoteelka Dream Palace Dubai
Dalxiiska Xeebta Badda ee Dubai & Dalxiis
Guryaha Dunes Hotel Al Barsha Dubai
Dusit Princess City Center Dubai Hotel
Degenaanshaha Dusit Dubai Marina
Guryaha Hoteellada ee Elite Classic Dubai
Emirates Concorde Hotel & Deganaanshaha Dubai
Emirates Stars Hoteellada Guryaha Dubai
Hoteelka Excelsior Creek Dubai
Hotelka Fairmont The Palm Dubai Hotel
Guryaha Flora Creek Deluxe Hotel
Guryaha Flora Park Deluxe Hotel
Guryaha Fortune Hotel Bur Dubai
Afar Dhibcood By Sheraton Downtown Dubai
Afar Dhibcood Waxaa qoray Sheraton Dubai
Afar Qodob oo uu qoray Sheraton Sheikh Zayed Road Dubai
Hotelka Gloria & Guryaha Dubai
Sands Sands 10 Guryaha Hoteelka Dubai
Sands Sands 3 Guryaha Hoteelka Dubai
Guryaha Dahabka Sands ee Dubai
Dahabka Tulip Al Barsha
Dahabka Tulip Suites Dubai
Huteelka Grand Hyatt Dubai
Hotelka Gulf Pearl Dubai
Hoteelka Hilton Dubai Creek
Degmooyinka Hilton Dubai Jumeirah
Hoteelka Ibis Deira City Center Dubai
Hoteelka Le Meridien Fairways Dubai
Hoteelka Hoteel Novotel Deira
Hoteelka Novotel World Trade Center Dubai
Hotel Pullman Dubai Mall Of Emirates
Hotelka Intercity Dubai
Hotelka InterContinental Dubai ee Magaalada
Guryaha Jormand Hotel Dubai
Jumeirah Nolosha Xarunta Ganacsiga Dunida Deganaanshaha Dubai
Hoteelka Kempinski & Deganaanshaha Palm Jumeirah
Kempinski Mall ee Emirates Hotel Dubai
Guryaha Legacy Hotel Dubai
London Crown 2 Hoteellada Guryaha ee Dubai
Guryaha Lotus Grand Hotel Deira
Huteelka weyn ee Dubai
Guryaha Marina Hotel Dubai
Guryaha Fulinta ee Marriott Dubai Creek
Guryaha Fulinta ee Marriott Beesha Cagaaran ee Dubai
Hoteelka Warbaahinta Rotana Barsha Dubai
Hotel Mercure Gold Al Mina Wadada Dubai
Mina A Salaan Madinat Jumeirah
Moevenpick Hotel Jumeirah Xeebta
Guryaha Movenpick Hotel Bur Dubai
Movenpick Hotel Ibnu Battuta Gate Dubai
Guryaha Najd Hotel Dubai
Guryaha Nojoum Hotel Dubai
Guryaha Nuran Greens ee Adeegga Dubai
Guryaha Oasis Beach Tower Hotel Dubai
Hal & Kaliya Dalxiis Palm Dubai
Guryaha Park Hotel Park
Hoteelka Park Hyatt Dubai
Madaarka Caalamiga ah ee Inn Dubai
Park Inns Dubai Investments Park
Hotelka Queens Dubai
Degenaanshaha & Dalxiis Hal & Kaliya Royal Mirage Resort Dubai
Guryaha Richmond Hotel Dubai
Deganaanshaha Rolla Dubai
Hoteelka Rose Garden Apartment ee Dubai
Apartment Hotel Royal Ascot Dubai
Guryaha Royal Home Hotel Apartment Dubai
Guryaha Savoy Crest Hotel Dubai
Guryaha Savoy Park Hotel Dubai
Hotelka Sea View ee Dubai
Hoteelka Sofitel Dubai Jumeirah Beach
Guryaha Splendid Hoteellada Dubai
Guryaha Starmetro Al Barsha Hotel Dubai
Guryaha Suha Hotel Dubai
Suite Novotel Mall ee Imaaradka
Cinwaanka Downtown Dubai Hotel
Cinwaanka Dubai Marina Hotel
Cinwaanka Hoteelka Dubai Mall
Cinwaanka Montgomerie Dubai Hotel
The Country Club Hotel ee Dubai
Hoteelka Meydan Dubai
Qasriga Hal Hal & Kaliya Royal Mirage Hotel Dubai
Qasriga Downtown Dubai
Hoteelka Dubai ee Ritz-Carlton
Ritz-Carlton, Xarunta Maaliyadeed ee Caalamiga ah ee Dubai
Waqtiga Grand Plaza Hotel Dubai
Waqtiga Oak Hotel & Suites Dubai
Ganacsatada Hotel Dubai By Shangri-La
Hoteelka Versailles Dubai
Guryaha Hoteelka Winchester Deluxe ee Dubai
Guri Ku Yaal Hoteelka Weyn ee Weyn ee Dubai
Guryaha Winchester Hotel Dubai
Guryaha Xclusive Hotel Dubai
Apartment Hotel Ziqoo Dubai
eHalal Safarka Mart > Imaaraatka Carabta Xalaal Safar > Hagaha Socdaalka Xalaal ee Dubai
Hagaha Socdaalka Wollongong Halal